Qalbigaaga geli Xiriirradaada | Martech Zone
Talaado, Janaayo 1, 2013 Douglas Karr
Ganacsigu wuxuu ku saabsan yahay cilaaqaadka. Xiriirka aad la leedahay macaamiishaada, rajadaada, iibiyeyaashaada iyo shirkaddaada. Xiriirrada way adag yihiin. Xiriirrada waa qatar. Wadnahaaga oo aad halkaa dhigto ayaa jabin kara. Waa inaad qalbigaaga gelisaa cilaaqaadkaaga haddii aad waligaa jeclaan lahayd inay guuleystaan, in kastoo.
Waxaa jira sababo badan oo xiriirka u burbura. Mararka qaarkood ma jiraan wax ku habboon. Inta badan cilaaqaadka ayaa xumaada maxaa yeelay waxaa loola dhaqmaa sidii wax la tuuro… halka dhinac kasta uusan qiimeyn xiriirka si siman. Qaarkood waxay u maleynayaan in xiriirku yahay 50/50. Taasi hadaad adigu kaqeyb qaadatid qeybtaada, anigana tayda ayaan sameyn doonaa. Xiriir labada dhinac ay ka qabanayaan kaliya kala bar wixii ay sameeyeen waayeen sameynta maahan xiriir gabi ahaanba. Taasi ma aha inaad wadnahaaga geliso.
Xidhiidhyadu way burburaan marka aynaan gelin 100%. Dhisida xiriir guuleysta waxay kaa dooneysaa inaad si buuxda ugu hawlan tahay. Geli 100% maxaa yeelay waxaad jeceshahay waxaad qabanayso, waxaadna jeceshahay inaad u adeegto kooxda kale. Wax kasta oo ka yar waxay u horseedi doonaan guuldarro.
Sannadkani waa sanadka aad u baahan tahay inaad dib uga fikirto cilaaqaadkaaga oo aad qalbigaaga geliso. Waa sanadkii la siinayo 100% si aad talo uga siiso bartaada. Waa sanadkii la siinayo 100% macaamiishaada iyadoon loo eegin inta ay bixiyeen, goorta ay bixinayaan, ama haddii ay ku qanacsan yihiin waxaad qabanayso. Ku dhejinta qalbigaaga waxay kaa caawin doontaa baahiyahaaga - maahan kuwa iyagu oo keliya.
Xeerka Dahabiga ahi wuxuu leeyahay in dadka kale loola dhaqmo sida aad doonaya in lagu daaweeyo Qof baa ii sheegay inuu jiro Qaanuunka Platinum… waana in loola dhaqmo dadka kale sidii waxay doonaya in lagu daaweeyo Waa waqtigii loola dhaqmi lahaa rajada, macaamiisha iyo iibiyeyaasha sida waxay doonaya in lagu daaweeyo Qalbigaaga geli.
Cabbiraaddu waa muhiim in la arko waxa shaqeeya, waxa rajadaada iyo macaamiishaadu rabaan, iyo in si habboon loo adeegsado ilahaaga. Weli waa inaad qalbigaaga gelisaa, in kastoo, si aad uga shaqeyso. Weli waa inaad 100% gelisaa cilaaqaadkaas haddii aad u rajeynayso inay ku guuleystaan.
Sannadkani waa sanadkii qalbigaaga la galiyay.
Flint: Nidaaminta Lacag-bixinta Moobaylka Iyadoo La Isticmaalayo Kaameradda
Jan 6, 2013 saacadu markay ahayd 11:28 PM
Jacaylku waa furaha xiriirka guuleysta. Ganacsi ahaan waxaa muhiim ah inaad qalbigaaga saarto waxa aad qabanayso. Dhis xiriir wanaagsan macaamiishaada, asxaabtaada iyo shirkadaada si aad ugu guuleysato.
Mahadsanid Sir Douglas.
Mahadsanid Douglas. Fikrado fiican oo maskaxdayda ah (iyo qalbigaba) subaxaan. Had iyo jeer waa ciyaar xiriir la leh ganacsiga iyo nolosha. Waan ku raacsanahay gebi ahaanba. Waxan kuugu fiicanahay adiga sanadka cusub!